Progressive Voice Myanmar » Statement by the UN in Myanmar
March 27th, 2021 • Author: United Nations in Myanmar • 1 minute read
The United Nations in Myanmar is horrified by the needless loss of life today with reports of dozens of people shot dead by the military across the country, in the bloodiest day since the coup. The violence is completely unacceptable and must stop immediately. Those responsible must be held to account. As the Special Envoy on Myanmar, Christine Schraner Burgener has said, ensuring peace and defending the people should be the responsibility of any military, but the Tatmadaw has turned against its own people.
The United Nations Country Team in Myanmar consists of FAO, ILO, IOM, ITC, OCHA, UNAIDS, UNCDF, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN HABITAT, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNODC, UNOPS, UNV, UN WOMEN, WFP, WHO.
ယနေ့တွင် နိုင်ငံအနှံ့အပြား၌ စစ်တပ်က လူပေါင်းဒါဇင်နှင့်ချီကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့်အတွက် အကြောင်းမဲ့ အသက်သေဆုံးမှုများဖြစ်ခဲ့ပြီး အာဏာသိမ်းစဥ်အတွင်း သွေးထွက်သံယိုမှုအများဆုံးနေ့တစ်ရက် ဖြစ်ခဲ့သည်ကို ကြားသိရသည့်အတွက် လွန်စွာ အံ့အားသင့်တုန်လှုပ်မိပါသည်။ အကြမ်းဖက်မှုများသည် လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါ။ ၄င်းတို့ကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရမည်။ တာဝန်ရှိသူများကို တာဝန်ခံစေရမည်။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener ပြောကြားခဲ့သကဲ့သို့ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြည်သူများအား ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးသည် မည်သည့်စစ်တပ်မဆို ထမ်းဆောင်ရမည့် တာဝန်ဖြစ်သော်လည်း တပ်မတော်သည် ပြည်သူများကို မိမိကိုယ်တိုင် ပြန်လည်ရန်ပြု တိုက်ခိုက်နေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဌာနေအဖွဲ့တွင် FAO, ILO, IOM, ITC, OCHA, UNAIDS, UNCDF, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN HABITAT, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNODC, UNOPS, UNV, UN WOMEN, WFP, WHO တို့ပါဝင်သည်။